Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Farmashiyeyaasha Alberta: Bixiyaha Keliya ee ugu Weyn ee Tallaalka COVID-19 ee Alberta
Farmashiyeyaasha Alberta ayaa gaadhay guul kale usbuucii la soo dhaafay, iyagoo hadda maamulay in ka badan 3.3 milyan oo tallaal COVID-19 ah, taas oo ka dhigaysa bixiyaha kaliya ee ugu weyn ee tallaalka COVID-19 ee gobolka.
Guushani waxay ku dhisan tahay mas'uuliyadihii hore ee farmashiistaha ee caafimaadka dadweynaha, oo ay ku jiraan doorkooda ka tallaalka hargabka, cudurka pneumococcal, iyo gawracatada-tetanus-pertussis. Sannadkii hore, farmasiilayaasha Alberta waxay maamuleen in ka badan hal milyan oo tallaal oo hargab ah, sannadkanna waxay si dhakhso ah u noqdeen bixiyayaasha koowaad ee tallaalada hargabka, iyagoo maamulay 80% dhammaan tallaallada hargabka ee gobolka. Farmashiyeyaashu waxay sidoo kale siin karaan Albertans da'doodu tahay 65 iyo ka weyn tallaalkooda pneumococcal (pneumo) waxayna haweenka uurka leh ka ilaalin karaan gawracatada-tetanada iyo xiiq-dheerta (dTap).
Iyada oo dhawaan la ballaariyay u-qalmitaanka COVID-19 ee qiyaasaha xoojinta ee gobolka, waxaa cad in farmashiyeyaasha Alberta ay sii wadi doonaan mashquulka weligood inta ay ka shaqeynayaan si ay u daboolaan baahida Albertans ee tallaallada si guud loo maalgeliyo ee farmashiyaha beesha deegaanka.